November 2014 ~ SAI SENG SERK
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီဖြစ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော (ပာုတ်ကော် ပာုတ်လို.လားလို. သေချအောင်ပြန်မေးချင်လိုက်တာ)
NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူတို.ပါတီ အမျိုးသားပာာ တိုင်းရင်းသားကို ကိုယ်စားပြုပြီး လုပ် နေတာတဲ. သူတို.ကိုယ် သူတို. ဗမာပါတီလို. မသတ်မှတ်ခဲ.ဖူးဘူးတဲ. ။ကျွန်တော်တော. နိုင်ငံရေး
သမားလဲမပာုတ်ပါဘူး အမြင်လဲမကျယ်ပါဘူးလူများလို. ဘွဲ.ရ ကျောင်းနိုင်ငံခြားတက်ပြီး International Noble Award and Peace Award ဆုလဲမရရှိခဲ.ပါဘူး။ဒါပေမဲ. ကျွန်တော်.အမြင် ဒီနေရာနဲ.နဲ.လေး တင်ပြချင်မိ.ပါတယ်။ DVB Burma News Channel (http://burmese.dvb.no/archives/70251) ကတင်ပြလိုက်တာပါ။ ဒေါ်စုက သူ.မိန်.ခွန်းမှာ သူတို.ပါတီ အမျိုးသားပာာ ဗမာ ပါတီအတွက်မပာုတ်ဘူး ပြည်ထောင်စု ပွားတိုင်းရင်းသားအတွက်ပါတဲ. ယုံလိုက်ရင်ကောင်း မလား မယုံရင်ကောင်းမလား ကျွန်တော်တော. ဒီနေရာမှာ နဲ.နဲ.လေး အမြင်ထည်.လိုက်မယ်ဘယ် လိုအမြင်လဲ ဆိုတော. ဒေါ်စုပြောတဲ. စကားနဲ. သူလုပ်နေတဲ.အရာတွေနဲ. တစ်စက်မှ မကျပါဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရင် သူပြောတဲ.စကားနဲ.ဆန်.ကျင်ဖက်ဖြစ်နေလို.ပါ။ကျွန်တော်လဲငယ်ငယ်တုန်းက ဒေါ်စုကိုအရမ်းလေးစားပြီးချစ်ခဲ.တယ်.လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ. ထောင်ကလွတ်လာပြီးနောက် ပိုင်း နှစ်နှစ်လောက်မှာ ကျွန်တော်တို. ရှမ်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်ကို ဒေါ်စု လာတုန်းက အပြောကြ တော.တစ်မျိုး အလုပ်ကြတော. တစ်မျိုးဖြစ်နေလို.ပါ ဥပမာ ကချင်ပြည်နယ် ကိုသူသွားတုန်းကဘာ တွေ ကချင်ပြည်သူလူထုတွေအတွက် ကတိပေးပြီး သစ္စာပေးလာခဲ.သလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည်.ကြပါ သူကိုယ်တိုင် မိန်.ခွန်းထဲမှာပြောတာက။ ကချင်ပြည်နယ်သည်သူပါတီတာအနိုင်ရခဲ.မယ်ဆိုရင်ကချင်ပြည်သူအတွက်အကျိုးအများထမ်းဆောင်ပေးမယ် ကချင်ပြည်ကိုလဲ သူကချစ်ပါတယ် သူ. အဖေကလဲကချင်ပြည်သူခေါင်းဆောင်နဲ.လဲ တစ်ချိန်းတုန်းက တစ်သွေးတစ်သားနဲ. ညီအစ်ကိုယ်ရင်းလိုနဲ. နေနေလာခဲ.တာတဲ.။အဲကြောင်. သူကချင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းအောင် တည်ဆောက် မယ်ဖြစ်နိုင်ရင် သူ.ပါတီ အမျိုးသား ကိုမဲပေးကြပါလို. နိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ. ၂၀၁၂ မှာ ကချင်ပြည်တွင်းထဲမှာ စစ်ဖြစ်လိုက်တော. သူက ဘာတွေ ၀င်ပြောပေးပြီး ဘာတွေကို ကချင်လူထု အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေသလဲ။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်.မတော်နဲ. ဗမာအစိုးရတပ်.မ တော်တို. Conflict and misunderstand ဖြစ်တာ အဲချိန်တုန်းက ဒေါ်စုကဘယ်ရောက်နေသလဲ ကချင်အေ၇းထဲမှာ သူဘာတွေ ကြားဝင် စေ.စပ်ပေးခဲ.သလဲ ။သူတစ်ချိန်လုံးတိုင်းရင်းသားကို ဦး စားပေးပြီးလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ. စကားနဲ. တခြားစီးပါ။ ၂၀၁၀ နဲ. ၂၀၁၁ မှာ ကျွန်တော်တို. ရှမ်းတပ်.မတော် မြောက်ပိုင်း SSPP/SSA နဲ. အစိုးရတပ်.မတော်တို. Civil War ဖြစ်တော.သူကဘာတွေကို ကြားဝင်ပြီး ဖြေရှင်းပေးခဲ.သလဲ ဒီလိုဖြေရှင်းခိုင်းလိုက်ခြင်းသည် သူကိုယ်တိုင် အမြဲပြောပြောနေတဲ. စကားက သူကတိုင်းရင်းသားကို ချစ်ပါတယ် သူ.အဖေ ပေးတဲ.ကတိ သူ.အဖေကျင်.သုံးတဲ. ပင်လုံ စာချုပ်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် မဖြစ်မနေ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ. စကားနဲ. လုံးဝ Opposite ဖြစ်နေပါတယ်ခ ။ကျွန်တော်တို. မြောက်ပိုင်းတပ်.မတော် SSPP/SSA စစ်ဖြစ်တုန်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ Refugee တွေ သိန်းသောင်းနဲ.ထွက်ပြေးရ တာ သူဘာတွေလုပ်ပေးခဲ.သလဲ။ ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းသည် သူလားရှိုးမှာ လာပြီး တစ်ချိန်တုန်းက ရန်တိုင်းအောင်မှာ Speech လုပ်တုန်းက ကျွန်တော် အဲတုန်းက BBC News ထဲကနေကြည်. လိုက်ရပါတယ်အဲချိန်တုန်းကလဲ သူထိုနည်းပါပဲ ရှမ်းပြည်သည် တိုင်းရင်သားပေါင်းစုံအများစု နေ ထိုင်သည်.ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော. တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုယ်တွေ အချင်းချင်း သူ.အဖေနဲ. ထိုအတူ လွတ်လပ်ရေးရအောင် အတူကြိုးပမ်းလာခဲ.ပါတယ်တဲ. အဲကြောင်. သူက တိုင်းရင်းသား တိုင်း ကိုချစ်ပါတယ် ရှမ်းပြည်သည် အေးချမ်းပြီး သာယာတဲ. ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တည်ငြိမ်အေး ချမ်းအောင်တည်ဆောက်ပေးမယ် လို.သူကိုယ်တိုင် Cheery ပြောတဲ.ထဲမှာ ထည်.ပြောလိုက်သေး တယ်။ဒါတွေအားလုံးပာာ ကျွန်တော်.အနေနဲ.ပြောရရင်သူ ပါတီအောင်မြင်ဖို.ပဲ သူ.ပါတီ နိုင်ဖို. ပြည်သူတွေ သူ.ပါတီကို မဲပေးကြစို. ဆိုပြီး တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလဲ ၂၀၁၅ နီးလာလေသူ စကားချိုအောင် ပြောလာလေလေပါပဲ။ဒါပေမဲ. ကချင်နဲ.ရှမ်းတော. အရမ်းကို ခံခဲ.လိုက်ရပြီ။သူ.ပါ တီကိုပေးမိ.တဲ. မဲတစ်ခုပာာ အလွန်ရှူံးဆုံးတဲ. ရလဒ်တစ်ခု ရလိုက်သလိုပါပဲ။ဒေါ်စုကို မချစ်တာမပာုတ်ပါဘူး ချစ်ပါတယ် လေးစားပါတယ် အမြဲလဲ လေးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ. အပြောအရင်မပြောပါ
နဲ. အလုပ်နဲ. အရင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။တောကလူဆိုတာ တကယ်ကို ရိုးသားပါတယ်။ကျွန်တော်တို. ရှမ်းပြည်ခရီးစဉ်ထွက်ပြီး Refugee တွေကို ထောက်.ပံ.ရေး လုပ်ပေးတုန်းက တစ်ချိန်တုန်းက ၂၀၁၁ ပေါ. ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတပ်.မတော်နဲ. အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ.အချိန် အဲချိန် တုန်းက ကျွန်တော်တို. အဖွဲ.သားများ ကျေးသီးမြို.နယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လာခိုလုံ နေကြ တဲ. ရှမ်းတွေပလောင်တွေ ကိုသွား.ကူညီပေးတဲ.အချိန်ပေါ.။အဲချိန်တုန်းက သူတို.ကကျွန်တော်တို. ကိုအကူအညီတောင်းပြီး သူတို.ခံစားခဲ.ရတဲ. ဝေဒနာ တွေ သူတို. တွေ.ကြုံနေရတယ်. အဖြစ်အ ပျက်တွေကို ဒေါ်စု ကိုတင်ပြပေးပါ ဒေါ်စု သိရင်ငါတို.ကိုချက်ချင်းကူညီမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် တဲ. (ယုံကြည်မူ.) အဲဒါက တောကလူတွေကဒေါ်စု ရုပ်တာမမြင်ဖူးကြပါဘူး ဒါပေမဲ. ဒေါ်စု ဆိုတော.လူ တိုင်းလုနီးပါးပါပဲခ လေးစားတာပါခ။ Asia တိုက်မှာ Peace Noble Academy ရတ.ဲနိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံပါဒါပေမဲ. ငြိမ်းချမ်းလားလို. ကြည်.လိုက်တော. နှစ်ပေါင်းခြောက် ဆယ်ကျော် ပြည်တွင်းမှာစစ်ဖြစ်လာနေကြတာ အခုချိန်ထိပါပဲ တစ်ခုခုတော. လွဲနေပြီလို. ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား၏ ရင်တွင်း ခံစားချက်ကို ဘယ်သူမှ မသိခဲ.ရပါဘူးဘယ် လို သတ်ဖြတ် ဘယ်လို မုဒိန်းကျင်.ခံရ ဘယ်လို စော်ကားခံရသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားက လွဲလို.။ဒေါ်စုကို တစ်ခုပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ ပါတီကို အနိုင်ရဖို.ပဲ အပြောကောင်းတဲ. လူပဲမလုပ်ပါနဲ. လက်တွေ.လုပ်ပြပြီးမှ ပြောပါ။မပာုတ်ရင် ရီစရာတွေပဲ ဖြစ်ကုန်တော.မှာ။ကိုယ်.ပါ တီ ကိုယ်အနိုင်ရဖို.ပဲ စည်းရုံးရေးလာလုပ်ပြီး အပြောကောင်းပဲ လုပ်နေမယ်တရွေ. တိုင်းရင်းသား တွေက ခံရအုံးမှာပဲ။အဲကြောင်. ကျွန်တော်.အမြင်သည် NLD ပါတီသည် တိုင်းရင်းသားများအ တွက် ပါတီမပာုတ်ပါဘူး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အတွက်လဲ မပာုတ်ပါဘူး။တကယ်လို.တာ အမျိုးသားပါတီ သည်တိုင်းရင်းသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ် အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသား ပါတီဆိုတာ ရှိလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲကြောင်. ဒေါ်စုကို မစော်ကားပါဘူး ဒေါ်စုကို မမုန်း ပါဘူး ဒါပေမဲ. တိုင်းရင်းသားပြည်ထောင်စုသားအတွက်ပါ သူ.ပါတီ ဆိုတဲ. စကား မသုံးပါနဲ. ကျွန် တော်တို. တိုင်းရင်းသားတွေကို ထိခိုက်လွန်းလို.ပါ။အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ . . . .
(မှတ်ချက် - လွတ်လွတ်လပ်လပ်ေ၇းသား ဆဲလ်ဆိုနိုင်ပါသည်။)
"လက်မထပ်ခင် အချစ်နယ်ကျွံခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ အ ကြောင်း"
လွတ်လပ်မှုကို ဦးတည် နေတဲ့အခု ခေတ်မှာ အရွယ် ရောက်သူတိုင်း အွန်လိုင်းသုံးတာရယ် ညစ်ညမ်းvideo တွေ အွန်လိုင်းမှာ ပေါ နေတာရယ် ကြောင့်လူငယ် တွေဟာ စိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင် တော့ဘူး။
တက္ကသိုလ်အ ဆောင် တွေမှာ နေတဲ့သူအချို့ဆိုရင် မိဘ မောင် ဖွားအုပ်ထိန်းမှုနဲ့ကင်းတာ ကြောင့်
ချစ်သူကို ရှာရတာ လွယ် နေတယ် ။ ချစ်သူ တွေ ဖြစ်ပြီဆိုရင် တည်းခိုခန်းတွေ ရောက်
အချစ်နယ်ကျွံဖို့ဝန်မ လေးကြ တော့ဘူး။ ကြောက်ရွံ့မှုလည်းမရှိကြဘူး။ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကလည်းပေါ နေတာကိုး။
အပေါင်းသင်းမှားပြီး မိန်းက လေးတန်မဲ့ဘီယာ တွေ သောက် ရည်းစားတွေထည်လဲတွဲတဲ့
မိန်းက လေးတွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်။နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကအဲ့ဒီချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ခင် အကြိမ်ကြိမ် မှားခဲ့ပြီးပြီဆိုပါစို့…
၁။ အဲ့ဒီချစ်သူဟာ အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး သေသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
၂။ မိဘသ ဘောတူတဲ့သူနဲ့ယူသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဲ၃။ လက်မထပ်ပဲ အ ပျော်ကြံသွားရင် ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
၄။ အိမ် ထောင် ရှိ နေရင် ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲ?ဲအဲ့ဒါ လေးတွေကို အရင် တွေးသင့်ပါတယ်။ပြီးတော့…
အဲ့ဒီချစ်သူမှာ ဘီပိုးစီပိုးရှိမရှိမသ်ိနိုင် ဘူး။ရှိရင် ကူးစက်ခံရပြီ ။H I V ကလည်း လူကောင်းလိုပဲ။
မသိနိုင် ဘူး။ ဆေးစစ်မှသိရတာပါ။ရှိ နေရင် ကူးစက်ခံရပြီ ။နောက်ထပ် မိန်းက လေးတွေအဖြစ်အများဆုံး
ကမ္ဘာမှာ တစ်မိနစ်လူရှစ် ယောက်နူန်းသေ နေတဲ့ သားအိမ် ခေါင်းကင် ဆာပါ။ အဲ့ဒါဟာ လိင် ဆက်ဆံတာက နေအဖြစ်များတဲ့ ရောဂါပါ။ချစ်သူကကာလသားရောဂါရှိမယ် ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ပျော်ပါးသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်
လိင် ဆက်ဆံရင်းသားအိမ်မှာပွန်းပဲ့ထိခိုက်မိပြီး ကင် ဆာဖြစ်နိူင် တယ်။နောက်တစ်ခုက…
ချစ်သူက အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီးသေပြီဆိုပါစို့ မိဘသ ဘောတူတဲ့သူနဲ့ယူသွားပြီဆိုပါစို့
မယူပဲ ရှောင် ဖယ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပြီဆိုပါစို့ မိန်းက လေးမှာလည်း ကိုယ်ဝန်ရှိ နေပြီဆိုပါစို့
ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ် အရှက်တကွဲဖြစ်ရပြီ လူမသိ အောင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ကြိုးစားတော့မယ်
ဖျက်ချမရရင် လူမသိ အောင် အခြားမှာ မွေးဖို့ကြိုးစားတော့မယ်မွေးမယ့်က လေးကို လမ်းဘေးစွန့်ပစ်ဖို့
ကြံစည် တော့မယ် နောက်ဆုံးစိတ်ညစ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ် သေဖို့ကြိုးစားတော့မယ် ။
အဲ့ဒါ တွေအပြင် နောက် တစ်ချက် ပေါ့… ချစ်သူ တွေဖြစ်လို့ အချစ်နယ်ကျွံပြီးမှ
အ ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးဆိုပါ တော့။ အခြားတစ် ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီ။
တစ်ချို့ဓာတ်သိတဲ့သူ တွေက မေးငေါ့ကြ တော့မယ် ။ လင် ယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုလည်း
ကွယ်ရာမှာ "အဲ့ဒီဘဲကြီးက နွားပါကွာ…သူ့မိန်းမက အရင် ချစ်သူနဲ့ဖွတ်ဖွတ် ကျေမတတ်ပဲ " ဆိုပြီး
ပြောခံရ တော့မယ်။ မွေးလာတဲ့ သမီးလေးဆိုရင် လည်း တချို့မလိုသူ တွေက "သူ့သမီးကလည်း သူ့အ မေလိုလာမှာပါကွာ…သူ့အ မေက ပွေလီမ"ဆိုပြီး ရှုံ့ချခံရ တော့မယ်။ အဲ့ဒါ တွေဖြစ်ရတာဟာ
လက်မထပ်ခင် အချစ်နယ်ကျွံခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပဲ ပေါ့ ။ဒါ ကြောင့် မိန်းက လေးတိုင်း
လက်မထပ်ခင် မိမိဘဝကိုတန်ဖိုးထားကြပါလို့ စေတနာအရင်းခံနဲ့ ဆန္ဒပြုရင်း…။ ။
[လိုအပ်ချက်များရှိသည်ဖြစ် စေ…အမှားပါခဲ့သည်ဖြစ် စေ…နားလည် ပေးပါလို့]
သေချာစဉ်းစားပါ လူကြီး တပ်. ခေါင်းဆောင် ပါတီများ အပေါင်းတို.
ကျွန်တော်လေ.လာသိရှိရသလောက်တော. အမေရိကန်မှာ ပြည်သူလူထုအတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ. ပါတီဆိုတာ နှစ်ပါတီပဲရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာလို. ပိုးဆိုးပက်စက် ပါတီပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော် ရှိခဲ.ရသလဲ အဲပါတီတွေကော် ဘယ်လူမျိုး ဘယ်လူတန်းစားအတွက် အကျိုးအပြည်.အ၀လုပ်ပေးခဲ.သလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါတီအင်အားအကြီးဆုံးက USDP ကြံ.ဖွံ. နဲ. NLD အမျိုးသား တို.တွေပဲ။အဲထဲမှာပါတီကြီးနှစ်ခုကဗမာလူမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီ။ကျန်တဲ.ပါတီအသေးအမွှားတွေကော်သူ
တို.အတွက်ဘယ်လောက်ထိ အခွင်.အရေးရှိပြီသူတို.လူမျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေခဲ.ပြီလဲ။ပိာုး စိတ်ပျက်တယ် များလိုက်တဲ. ပါတီ များလိုက်တဲ. နိုင်ငံရေးသမားတွေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး သမားတွေ အရမ်းပေါ.တဲ. နိုင်ငံပဲဒါပေမဲ.တိုးတက်လားလို.ကြည်.တော်လဲထိုင်းလောက်ကိုမမိသေးပါဘူး။အဲဒီပါတီ ခြောက်ဆယ်ကျော် အဲလောက်များတဲ. ပါတီတွေက ဘာအတွက်တည် ထောင်လာသလဲ ဘယ်လို Policy တွေ မူတွေနဲ. ရပ်တည်သလဲလို. လေ.လာကြည်.လိုက်ရင် ပဲာ ပဲာ ၇ီရတယ်တစ်ယောက်မှမူမတူဘူး ပေါ်လစီမတူကြဘူး။ကဲဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြည်သူအတွက်
ကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော.မလဲ ???သူတို.နေရာကောင်းရဖို.ဆိုတာ ပြည်သူလူထုတစ်ယောက်၏ Vote ပေးခြင်းခံရပြီး ကောင်းကောင်းထိုင်ပြီး တစ်လကို ငါးသိန်း စားနိုင်ဖို. ပြည်သူကပဲလုပ်ပေးတာ။သူတို.တွေကော်ပြည်သူအတွက်ဘာလုပ်ပေးပြန်ခဲ.သလဲ မတရားသိမ်းတဲ.လယ်ယာမြေတွေ ပြန်ရမယ်.အစား တရုတ်နဲ.ပေါင်းပြီး လယ်တွေသိမ်း ယာတွေသိမ်းပြီး စီးပွားရေးအတူလုပ်နေကြတာ။တစ်ချိန်တုန်းက၂၀၀၅တုန်းကကျွန်တော်တို.ရွာမှာနေ နေတာက။အကြောက်တရားဆိုတာ သုံးခုရှိခဲ.ပါတယ်။
စစ်တပ်ကိုကြောက်ရတာရယ် တော်လှန်ရေးသမားကိုကြောက်ရ နဲ. ပြည်သူ.စစ်ကိုကြောက်ရနဲ. ၂၀၁၀ Election လုပ်လိုက်တော.အကြောက်တရားတွေခံခဲ.ရတာတွေကိုရင်ဖွင်.လို.ရပြီလို.ထင်နေတာ။ပိုပိုတောင်ဆိုးလာသေး ပာိုးတုန်းက အကြောက်တရားဆိုတာ သုံးခုပဲရှိတာ အခုဆိုရင် လေးခုရှိသွားပြီ ဘာထပ်တိုးလာသလဲလို.ကြည်.လိုက်တော.။၀န်ကြီးတွေကိုကြောက်ရပြန်ရော ရွာမှာဆိုရင် ဒီလေးယောက်ပာာ အာဏာအရှိဆုံးပဲ။၀န်ကြီးဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ခေါင်းကမိုးပေါ်မောပြီး အောက်ကိုတောင်မငုတ် တတ်တော.ဘူး။ကြည်.ရတာ ကြာရင် တော.အကြောလွဲနေအုံးမယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်.အမြင်မှာတော.အဲလောက်များတဲ.ပါ
တီတွေ ခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိတာ သူတို.တွေ ပါတီတွေလဲ ထောင်ကိုထောင်နိုင်တယ် ဘာလို.အဲလောက်တောင်ပါတီထောင်ပြီးလွတ်တော်ထဲမှာအာဏာလုခြင်ကြသလဲ။အဲထဲမှာကတစ်ဝက် ကျော်ကျော်က ဗမာလူမျိုးက ၄၀ပါတီလောက်ပါနေပြီ။ပါတီများတယ် နိုင်ငံရေးသမားများတယ်ပာုတ်ပါပြီ တချို.ဆိုပိုဆိုး ရှေ.ကဒို.အရေးလို. အော်ရင် နောက်ကလိုက်အော်လိုက်သေးတယ်ဘာတွေပြောပြောမှန်းမသိ။စာတတ်ပေတတ်များလားလို.ကြည်.တော်လဲ အဲလောက်ထိမပာုတ်သေးဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံရေးစိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ဘာလို.
လဲဆိုသော်ကိုယ်.နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ.အရာတွေကိုသူတို.ကအကုန်သိနေမယ်လေ။စာဘယ်လောက်ပဲတတ်တတ် ပညာဘယ်လောက်ရှိရှိ နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စား ကိုယ်.နိုင်ငံအကြောင်းမသိနားမလည်ရင်တော. ကိုယ်.အိမ်ပေါ်သူစိမ်းတက်လာပြီးကိုယ်.ကလေးမယားမုဒိန်းကျင့်သွားတာနဲ.အတူတူပဲ။ပညာမတတ်ရင်နိုင်ငံရေးသမားလုပ်လို.လဲမရဘူး ဒါပေမဲ.ဘွဲ.မရချင်နေပါစေအဓိက ကလေ.လာမူ.ပဲလို.ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို.နိုင်ငံကြီးသည်ခေတ်အဆက်ဆက်ခံခဲ.ရတာတွေကို ပြည်သူလူထုအတွက် ရင်ဖွင်.ပြောပြနိုင်ဖို.ဆိုတာ ဒီကိုယ်ပေးလိုက်တဲ. မဲတစ်ခုကြောင်. သူလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို.ထင်တာပါ။ဒါပေမဲ. အခု မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိုကြည်.လိုက်တော်လဲ အီလည်လည်ကြီးနဲ. ဘာမှန်းကိုမသိတာ ။ Reform and Transition ကဘယ်လောက်ထိမှလဲ လုပ်နေတာလဲမပာုတ်သေးပါဘူး။ ကြည်.သွားကြည်.လာ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲပဲလေ။မကြာသေးခင်မှာပဲ နေပြည်တော်မှာ လူကြီးထပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ Meeting လုပ်တယ်ဆိုတာ အပြုသဘောပါပဲလုပ်တာ ဘာတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော. ဘာတွေ Result မရရှိခဲ.ပါဘူး။မတွေ.တာထက်ဆိုင်ရင်တော. မျက်နှာရတာကလွဲလို.ပေါ။လက်တွဲနူတ်ဆက်တယ် ဖက်ကြတယ်ရင်းနှီးကြတယ်ဆိုတာ လူပဲရှိသေးတယ် စိတ်က သူစိမ်းပါပဲ။
Cease Fire လုပ်နေတဲ. Ethnic Army Groups နဲ.လဲလက်တွဲတာနူတ်ဆက်တာတကယ်တမ်းယုံကြည်မူ.ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ဘာလို.လဲဆိုတော. အစိုးရကအခွင်.အရေးယူပြီးတပ်ဖြန်.တယ် နေရာတွေချဲ.တယ်ပြီးတော.လူအင်အားလက်နက်အင်အားဖြည်.လို.ပေါ ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ. သဘောမဆောင်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားတွေက ***စစ်ပွဲများကို အနိုင်တိုက်နိုင်သော ဗိုလ်ချုပ်များကို မလိုလားဘူး တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုက်ပြီး သီပာသူရဂုဏ်ဘွဲ.ကို ရတဲ.လူကိုလဲ အထင်မကြီးဘူး ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရယူနိုင်တော. ဗိုလ်တွေကိုပဲ အထင်ကြီးတာ *** အခုဗမာအစိုးရက အဲလိုမပာုတ်ဘူးနယ်မြေစိုးမိုးဖို.ပဲသိတယ်။ကျွန်တော်.အမြင်တော. နောက်လာမယ် ၂၀၁၅ Election ကလဲဒီတိုင်းတာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေက ပိုပိုဆိုးဆိုးလာပါ လိမ်.မယ်။ Constitution 2008 လဲမပြင်ရသေးဘူး အသစ်ပြန်လဲမဆွဲရသေးဘူးဆိုရင် နောက်နှစ်
၂၀၁၅ မှာ President ဆိုတာ USDP ကြံ.ဖွံ.သမားတွေပဲ (ဗိုလ်ချုပ်အရပ်သားပြောင်းတွေ) ပြန်ဖြစ် မှာ (သူရရွှေမန်း မပာုတ်ရင် မင်းအောင်လှိုင်) ပဲသေချာတယ်။ပါတီသမားတွေကတော. Constitution 2008 ပြင်ဖို.ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကတော.Nationwide ရဖို.ကြိုးစားနေကြတယ်။အဲထဲမှာဘာတစ်ခုမှ အောင်မြင်မူ.မရရှိခဲ.ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေး လို.တာပြောတာ UNFC ထဲကတောင် သဘောထားကွဲလွဲနေပါပြီ။အဲဒါက ဗမာအစိုးရက Discrimination လုပ်လို.ပေါ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ.ရပြန်တာကတော. DKBA ထဲက ဗိုလ်ကြီး စောဆန်းအောင် ကိုတပ်ဖွဲ.ထဲကထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာလဲ။ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအစိုးရကလုပ်စော်လို.ပဲ။ဒါကို ကြည်.ခြင်းအားဖြစ်.အစိုးရက တပ်ဖွဲ.ခြင်းစီကိုလဲ ဆက်ဆံတာလဲမတူဘူး။အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြစ် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုနေကြတဲ. UNFC ကပြိုကွဲချင်နေပြီ။ကျွန်တော်တို.ရှမ်း လဲထိုနည်းပဲ ပါတီပိုင်းဆို နှစ်ခု အခုချိန်ထိ လုံးဝ မပေါင်းစည်းနိုင်တာက ဘာမှမပာုတ်တဲ. Constitution 2008 ကြောင်.ပဲ။တိုင်း လက်ခံတာနဲ. လက်မခံတာနဲ. မပေါင်းနိုင်ပြန်ရော။ဒီတိုင်းတာဆက်သွားရင်ရှမ်းပါတီတွေက နောက်ထပ်တစ်ပါတီများတိုးလာနိုင်အုံးမလားမသိဘူး။ဘာဖြစ် လို.လဲဆိုတော. ပြည်သူလူထုကို သူတို.ကဘာမှလက်မလျော်.ပေးလို.ပေါ. (ပေါင်းစည်းဖို.)နောက်ထပ် ရှမ်းပါတီ တော.မတိုးချင်တော.ပါဘူး ဒီကရှိနေတဲ.ပါတီတောင် မစည်းလုံးနိုင်ပဲနဲ. နောကထပ်ဆိုပိုဆိုးမယ်။ရှမ်းပြည်အရေးလဲ အင်မတန် အရမ်း Confusion ဖြစ်တယ် ရှမ်းတွေကလဲထို နည်းပါပဲ Power and Influence ကိုတော်တော်နှစ်သက်ကြတာပဲလေ။လက်နက်ကိုင်ဆိုရင်ဘာမပာုတ်တဲ. မာနချိန်ခွင် လာသုံးနေသေးတယ်။အထက်ကခေါင်းဆောင်ကို အထင်ကြီးစရာတစ်ခုမှမ ရှိဘူး။ဒီနေ.ဒီချိန်ထိ ကျွန်တော်ကြည်.လာတာ ရှမ်းခေါင်းဆောင် တပ်ဖွဲ.ရော ပါတီရော ရှမ်းလူမျိုးအတွက် ကိုယ်စားပြုပြီးတော. လုပ်ပေးခဲ.တယ်ဆိုတာ တစ်ဖွဲ.မှမရှိဘူး ဘယ်တပ်.မှလဲမရှိခဲ.ဘူး။ဒါပေမဲ. ပြန်မရနိုင်တဲ. လူတစ်ယောက် (SSNA စ၀်ကန်းရွက်) ကိုတော.ကျွန်တော် အထင်ကြီးခဲ.မိ. ပါတယ်။အခုလက်ရှိ ရှမ်းတပ်တွေ ပါတီတွေ ရပ်တည်ချက်လဲ မတူညီကြဘူး။ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို.ဆို တာတွေလဲ အလားလာမရှိပါဘူး။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတာ လက်တွဲနူတ်ဆက်တာ ကိုယ်.အိမ်ကိုယ်
ပြန်ရောက်သွားရင် ထမင်းဝိုင်းပေါ်က ပြောမိ.တဲ.စကားတွေ က အရက်နဲ. ၀ိုင်ထဲနဲ.အကုန်ပါသွား ကုန်ပြီ ရှမ်းတွေက ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ပြောရင်တော. မိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်မယ်နဲ.လို လို လုပ်လိုက်ရင်တော. တစ်လွဲတွေပဲ ဒါတွေလဲ ကျွန်တော်တို. မပေါင်းစည်းနိုင်တာလဲ ဗမာအစိုးရ
ပဲ သူတို.အပိုင်း (ဗမာအစိုးရ) က ကျွန်တော်တို. ရှမ်းတွေ မပေါင်းစည်းနိုင်လေ ကောင်းလေပဲ ပြိုကွဲ
အောင်လုပ်ရမယ်. တာဝန်က ကိုယ်.၇န်သူတာဝန်ပဲ အဲဒါကို ရှမ်းတွေက လိုက်မူးရူးပြီး အသိတရား ကနဲ.လွန်းတော. ခက်တော.တာပေါ.။စည်းလုံးဖို.ဆိုတာ အဓိက စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ကိုယ် လုပ်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ. စိတ်ကမရှိလို. အခုချိန်ထိ မပေါင်းစည်းနိုင်တာပေါ.။ကားရှိ တိုက်အိမ်တွေရှိပြီ ဆို မိန်းမကလဲ ချောချောလေးလဲရ လိုချင်တဲ. မိန်းခလေးတွေကို လက်ညှိးထိုးပြီး ယူလို.ရတယ်ဆို တော. နိုင်ငံရေး စစ်ရေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားတော.မလဲ ။ပါးစပ်တာ ရှမ်းလူမျိုးအတွက လုပ်ပေးတယ်လို.တာပြောတာ တကယ်တမ်း သူတို.သားသမီးနဲ. မယားကြီး မယားငယ်တွေအတွက်ပဲ။ဒါတွေကိုမပြောတော.ပါဘူး အရေးမကြီးပါဘူး။အဓိက လိုချင်တာက ရှမ်းတွေစည်းလုံးဖို.နဲရည်မှန်းချက်အမှန်တရားကို ရှေ.တန်းတင်ပြီလုပ်သွားဖို.ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကိုယ်လျှောက်နေတဲ. လမ်းကို မှန်အောင်သွားဖို.ပဲ။ရန်သူခြင်းကတူပြီး မပေါင်းစည်းနိုင်လို.ကတော. ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တွေ အတွေးနဲ.ပြီး တစ်သွေးတစ်သားဖြစ်ခဲ.ရင်တောင်မှ အများအတွက်မလုပ်ပေးချင်လို.ပဲပေါ.။ ၀
တွေကပြောတာပဲ ရှမ်းတွေ ရှမ်းလုံးရင် ၀ အင်အားဆိုတာ ရှမ်းကိုပြန်ခုံခံဖို.တောင် မနိုင်နိုင်ဘူးလို. ဦးအိုက်လူက ပြောခဲ.ဖူးတာပဲ။လူတိုင်းလဲသိပါတယ် စည်းလုံးရင် လုပ်ချင်တာလဲလွယ် သွားချင် တာလဲမြန်တယ်ဆိုတာ။အခု ကရင်တွေက စည်းလုံးလို. လေယဉ်နဲ.တောင် ခရီးသွားဖို.ပြင်နေပြီငါ
တို.ရှမ်းကြတော. အခုချိန်ထိ နွားလှည်းကနေ မပြောင်းနိုင်ပဲနဲ.တော. ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူများကိုမိ နိုင်တော.မလဲ။ဒါပာာ ငါတို.အားနည်းချက်ပဲဆိုတာ သိတိုင်းနဲ. ဘာမှမလုပ်တာ အဲဒါကို ငအာ လို. ခေါ်တာ။ဗမာအစိုးရက ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားတွေကို မစည်းလုံးနိုင်အောင် လုပ်ရမှာကသူတို.အပိုင်းပဲလေ မစည်းလုံးလေ Very Good လေပဲပေါ.။အဲဒါကို သိတဲ.အတိုင်း ရှမ်းပါတီနဲ. တပ် ခေါင်းဆောင်သမားတွေက အသား ကြိုက်မှ တော. ဗမာအကြိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ.။ပာား ပာား . . . တပ်ထဲက လူတွေဆိုတာ ဒီထက် ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ.လူတွေကအများကြီး အထက်ကလူကြီးက
မသိဘူးလားလို. တွေးကြည်.တော. သိသိတိုင်းနဲ. မလုပ်တာ ခက်တယ် ခက်တယ် ။ကျွန်တော်တို. ရှမ်းဘိုးဘွားတွေ ရှမ်းအင်ပါယာကြီး နိုင်ငံတည်ထောင် ဖို.ဆိုပြီး ကြိုးစားအားထုပ်ပြီးအသက်ပေး ပေါင်းလဲများလှချေပြီ အခုသူတို. New Generation ကြတော. ဘိုးဘွားတွေ လုပ်တဲ.အတိုင်းလိုက်မလုပ်ကြဘူး။ဘာမပာုတ်တဲ. မူနဲ. ပေါ်လစီက ကွဲနေပြီ အိုး အိုး အိုး ရှက် ဖို.ကောင်းလိုက် တာ ရှမ်းတွေ။တော်လှန်ရေးသမားလုပ်တယ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် တပ်ထဲဝင်လာကြည်. အား နည်းချက်ဆိုတာ များမှများ ထင်ထားတာထက် များသေးတယ် ဒါပေမဲ. ဘယ်အရာမဆို သူ.ပာာသူအားနည်းချက်ဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ အနည်းနဲ.အများပေါ. ဒါပေမဲ. ခက်တာက သုည ကနေရှမ်းတွေ ကမတက် နိုင်ပါဘူး။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေလိုက်လို. ဆယ်တန်းကျပြီး သုည တွေထွက်လာပြီး ရှက်တတ်မယ်.အစား ထွက်လာတဲ. သုည ကိုကြက်ဥတာဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူတို.က ကျော်စားချက် တောင်စားလိုက်ချင်သေးတယ်အဲလို ရှမ်းတွေက ညှာလား တော်လား အ လား လည် လားဆိုတာ။ အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ။
(ရှမ်းစာရေးရင် တစ်ချို. Personal and Ministry တွေမမြင်မှာကြောက်လို. ဗမာလိုရေးပေးတာ အမှားများပါရင် တောင်းပန်ပါတယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် Comment ရေးနိုင်သည် )
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီဖြစ်ဟု ဒေ...
"လက်မထပ်ခင် အချစ်နယ်ကျွံခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကိ...
သေချာစဉ်းစားပါ လူကြီး တပ်. ခေါင်းဆောင် ပါတီများ အေ...